ZOMA 24 JANOARY 2020
DISTRIKAN’I MAHANORO : Mila taratasy ara-panjakana ny famoahana Lavanila
Hentitra ny fandraisan’andraikitr’ireo manam-pahefana ao anatin’ny Distrikan’i Mahanoro eo amin’ny fiarovana ny fivoahan’ny vokatra lavanila. 9 septembre 2019
Tsy maintsy mahazo taratasy fahazoan-dalana avy amin’ny tompon’andraikitra ao an-toerana vao mahazo mivoaka ao Mahanoro ity vokatra fanondrana ity, mba hisorohana ny lafiny tsy fandriam-pahalemana mifandraika amin’izany. Miara-misalahy amin’izay fikaroham-bahaolana izay ireo tompon’andraikitra isan’ambaratongany ao an-toerana miainga amin’ny lehiben’ny Fokontany hatrany amin’ny lehiben’ny Distrika.
Ny faran’ny herinandro lasa teo no nivory ireo solontenam-panjakana ao Mahanoro, izay nahitana ny lehiben’ny Distrika sy ny solombavambahoaka voafidy tao an-toerana, ary ny Ben’ny tanàna. Nandray anjara feno tamin’ity fivoriana ity ihany koa ireo mpisehatra rehetra eo amin’ny famokarana lavanila, toy ny mpamokatra sy ny mpandraharaha. Tapaka nandritra an’io fivoriana io fa tsy azo hatao intsony manomboka izao ny mitondra vokatra mivoaka ny tanàna raha tsy mahazo taratasy ara-dalàna avy amin’ny tompon’andraikitra.
Fantatra fa saika alefa mankany amin’ny avaratry ny Nosy avokoa ny ankamaroan’ireo vokatra ao Mahanoro. “Ny zavatra tapaka eo amin’ny fiarovana ny fandriam-pahalemana ato anatin’ny Distrikan’i Mahanoro dia tsy mahazo atao fampivezivezy ny vokatra lavanila raha tsy mahazo taratasy avy amin’ny tompon’andraikitra satria betsaka amin’ny lavanila eto Mahanoro no entina any amin’ny faritra Avaratra”, hoy fanazavan’ny solombavambahoakan’i Mahanoro, Rakotoson Hubert.
Ankoatra izay dia tapaka tao anatin’io fivoriana io ihany koa fa manana alalana afaka hisava an’izay olona mampiahiahy ny Ben’ny tanàna sy ny lehiben’ny Fokontany amin’ireo Kaominina miisa 11 mandrafitra ny Distrikan’i Mahanoro. “Nomen’ny lehiben’ny Distrika alalana ireo lehiben’ny Fokontany hampiasa ny bokim-bahiny hisava an’ireo olona izay mampiahiahy, ka hampahafantatra an’ireo tompon’andraiki-panjakana mba hahafahana mahalala ireo olona mangalatra lavanila sy mitondra ny entana tratra noentina an-tsokosoko eo anivon’ireo manam-pahefana.
Tahaka izany ihany koa ny Ben’ny tanàna dia miara-misalahy amin’ny fiarovana ny vahoaka amin’izay resaka seha-pihariana lavanila izay”, hoy hatrany ny fanazavany.
Efa saika misokatra amin’ny fomba ofisialy avokoa ny taom-piotazana lavanila amina Faritra maro manerana ny Nosy. Ny tsirairay dia samy mametraka lamina sy paikady avokoa eo amin’izay lafiny fiarovana ny tsy fandriam-pahalemana izay.
Nahatratra hosoka miisa 89 tamin’ny fidirana ho miaramila ETAMAZAORO JENERALIN’NY TAFIKA (289) 20 janvier 2020 Jiolahy mpandroba izy roalahy maty voatifitra fa tsy tanora mpianatra AMBALAKISOA TOAMASINA (261) 20 janvier 2020 Naato tamin’ny asany ny Lehiben’ny Pompiers FIHOTSAHAN’NY TANY TENY AVARADOHA (173) 21 janvier 2020 Miatrika famotorana lalina ny tale jeneraly teo aloha ORINASA KRAOMITA MALAGASY (159) 22 janvier 2020 Nahitana fatim-behivavy tsy nisy loha novonoina tao Analaradjy SAINTE-MARIE (151) 20 janvier 2020 Tovolahy iray namoy ny ainy, novonoina tamin’ny fomba feno habibiana MANANARA AVARATRA (148) 22 janvier 2020